China Paulownia Multiply Plywood orinasa sy mpanamboatra |Changyu
Tava / Lamosina: E-Wood / custom
Core: Paulownia Veneer na Paulownia Blockboard
Habe: 1220x2440mm / 1230x2520mm / custom
Product Details sy ny tombony
Misy sosona manify maromaro amin'ny hazo paulownia mifamatotra sy miraikitra amin'ny plywood paulownia manokana.Ity solaitra ity dia manana toetra mahatohitra ary maivana, izany dia rehefa nahazo veneers tamin'ny alalan'ny dingana unrolling.
Raha fintinina dia mifanentana tsara amin'ny sehatry ny ranomasina na eo amin'ny sehatry ny fiara ny fahaizan'ity plywood ity.
fandokafany: Ny takelaka plywood dia ahafahanao manamboatra ny atitany nefa tsy mametaka be loatra ny rafitra na mametraka adin-tsaina amin'ny fiasan'ny motera sy ny fiara.Ny plywood Paulownia no fenitry ny volamena handrefesana ny fitaovana mifaninana amin'ny fanamboarana toby sy fiara fitateram-bahoaka.
manovaova: Ny takelaka plywood HW dia mety amin'ny famoronana fanaka araka ny famolavolana.Ny efitra fandroana, ny lakozia ary ny toerana ipetrahan'ny campers sy ny caravans amin'izao fotoana izao dia mifanandrify amin'ireo ampiasaina amin'ny trano mahazatra.Izany dia noho ny fanaka miasa azy ireo, izay natao manokana ho an'ny toerana kely ary namboarina tamin'ny fitaovanay.
HERY: Ny plywood misy antsika dia maharitra mandritra ny fotoana tsy misy simba.Izany dia fepetra fototra ho an'ny fampiasana ao anatin'ny fiara namboarina mba hanana androm-piainana lava sy handehanana kilometatra maro.HW plywood, izay ampiasaina amin'ny fananganana atitany amin'ny indostrian'ny fiara, dia manana kalitao avo lenta foana.Izy io dia mitazona ny toetrany rehefa mandeha ny fotoana, ahafahan'ny mpanamboatra miantoka ny faharetan'ny fiara iray, ny endrika anatiny ary ny fanaka.
Paulownia dia hazo ravina teratany any Shina, izay mampiavaka azy dia ny fitomboany haingana.Noho izany dia ahafahany mitroka CO2 avo 10 heny noho ny karazana arboreal hafa.
Raha ny hazo, ny tena mampiavaka azy dia ny ambany hakitroky (270 Kg / m3).Amin'ny maso dia mahita hazo maivana isika, misy loko mavokely ary madio amin'ny knot.Noho ny bika aman'endriny dia manome hafanana tsy manam-paharoa ny Paulownia.
Anisan'ireo fampiharana tsy manam-petra hitan'ny mpanjifanay, dia asongadinay ny fampiasana hazo Paulownia amin'ny fanamboarana ny karazana fanaka rehetra, solaitrabe, sauna, fitaovana, tapa-kazo ho an'ny fiara sy sambo, varavarana, boaty, sns.
Ny fahaizany mitantana dia mahatonga ny hazo Paulownia ho fitaovana mety indrindra hampidirana amin'ny vokatra rehetra izay mitaky fahamaivanana.
Anaran'ny vokatra HW Paulownia plywood ho an'ny atitany fiara
fototra Paulownia, Poplar, hazo mafy, eucalyptus, okoume, birch, pine, combi, sns.
HW Paulownia Core Plywood ampiasaina amin'ny Caravan / RV / Touring Car Interior, ary koa ny fampiharana fanaka.
teo aloha: Plywood Flooring
Manaraka: Sarimihetsika Birch Faced Plywood
HW 2.0mm 2.4mm 2.7mm 3.0mm hateviny manify bendi ...
Karazana sy RV Lightweight Block Board
HW 1.5-5MM matevina matevina Ilomba Veneer plywood